ကိုယ်ပိုင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ကျေနပ်မှု။ ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်ခြင်း (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအမြင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု: တစ်ဦးက quadratic အားသုံးသပ်ခြင်း (2017)
မှတ်ချက်များ: အထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို, ဘာသာရေးသို့မဟုတ် Non-ဘာသာရေး, သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်။ လေ့လာမှုတစ်ဦးထံမှကောက်နုတ်ချက်:
J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2017 စက်တင်ဘာ 8:0။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2017.1377131 ။
Wright PJ, တံတားများ AJ, နေရောင်ကို C, Ezzell M က, ဂျွန်ဆင်ဂျေအေ.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုစမ်းသပ်နှင့်စူးစမ်းနှစ်ဦးစလုံးသုတေသနအတွက်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဆက်နွယ်မှု hypothesize ရန်အသုံးပြုသည့်ဘာသာစကားကိုမဆိုဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ဘဲခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောသို့မဟုတ်မှသာရံဖန်ရံခါကြည့်ရှုသည်ထက်, ကမကြာခဏကြည့်ရှုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တစ်ဦးခန့်မှန်းပြီးစံနှုန်းအကြားဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝဟာခန့်မှန်း၏အဆင့်ဆင့်ပေါ်မူတည်သည့်အခါ, တစ်ဦး curvilinear ဆက်ဆံရေးမျိုးညွှန်ပြနေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာလေ့လာမှုများသူတို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချဉ်းကပ်မှုအတွက် linear ယူဆခဲ့ကြသည်။ သူတို့အထူးစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်လျှင် Curvilinear ဆက်ဆံရေးလုပ်စရာမလိုဘူးသွားလိမ့်မည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1,500 အမေရိကန်လူကြီးများ၏စစ်တမ်းတစ်ခုကနေရလဒ်တွေကိုတွေ့ရမယ်။ quadratic ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ်အများစုနေထိုင်ပြီးအနှုတ်လက္ခဏာ, ခွက်အောက်ဖက်ကွေး၏ပုံစံအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားတစ်ဦး curvilinear ဆက်ဆံရေးမျိုးညွှန်ပြ။
ပါဝင်သူများ၏ကျား၊ မဆက်ဆံရေး၊ သို့မဟုတ်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှု၏သဘောသဘာဝအရ curvilinearity ၏သဘောသဘာဝကွဲပြားမှုမရှိပါ။ သို့သော်အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည်အမြိုးသမီးမြားအတှကျ၊ အမျိုးသမီးများအကြား, ဆက်ဆံရေး၌ရှိသောလူများအတွက်နှင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောဘာသာရေးသမားမဟုတ်သူများအဘို့ထက်အမျိုးသားများအတွက်အနည်းငယ်ပိုမိုသိသာထင်ရှားခဲ့သည်။ အုပ်စုများအားလုံးအတွက်ကြည့်ရှုခြင်းသည်တစ်လသို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ ရောက်ရှိသောအခါအပျက်သဘောရိုးရှင်းသောဆင်ခြေလျှောများရှိသည်။ ဤရလဒ်သည်သာဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည့်ရှုထောင့်ကိုအသုံးပြုပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတစ်လတစ်ကြိမ်မသုံးစွဲခြင်းသည်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်သို့မဟုတ်လုံးဝမရှိကြောင်း၊ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းသည်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ကြည့်လျှင်တစ်ချိန်ကရောက်ရှိခြင်းနှင့်အကြိမ်ရေတိုးခြင်းတို့ဖြစ်သည်ဟုအကြံပြုလိမ့်မည်။ စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်အချိုးအစားမမျှမပိုကြီးတဲ့လျှော့ချဖို့ ဦး ဆောင်ကြည့်ရှု။